Madasha Xisbiyada Qaran oo shir 3 Cisha u socday oo war ka soo saaray | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madasha Xisbiyada Qaran oo shir 3 Cisha u socday oo war ka...
Madasha Xisbiyada Qaran oo shir 3 Cisha u socday oo war ka soo saaray
Qaar ka mid ah hogaanka sare ee Madasha Xisbiyada Qaran oo sadexdii cisho ee ina dhaaftay kulan ku lahaa Decale Hotel ee magaalada Muqdisho ayaa isla gorfeeyay arimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo marxaladda kala guurka ah ee uu dalku galay.
Kulankan oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran mudane Sharif Sheikh Ahmed, qeybna uu ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka “UPD” mudane Hassan Sheikh Mohamud ayaa ujeedkiisu ahaa maareynta marxaladda xasaasiga ah ee dalku marayo.
Waxaana intii uu socday kulanka ay hogaanka sare ee Madasha Xisbiyada Qaran la tashiyo la sameeyeen masuuliyiin ka tirsan Madasha oo dalka dabiddiisa ku maqan, qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, waxgaradka iyo dhaqanka Soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madasha.
Gabogabada kulankan sadexda cisho u socday hogaanka sare ee Madasha Xisbiyada Qaran ayaa lagu shaaciyay in ay lagama maarmaan tahay in doorashada dalka ay xilligeeda ku qabsoonto, lagana wada heshiiyo.
Previous articleMadaxweynaha Juubbland oo Xaruntiisa ku qaabilay Safiirka Qadar ee Soomaliya
Next articleKiisas Cusub oo mar kale laga helay magaalada Muqdiaho
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo aflagaado u geestay diinta islaamka
Golaha shacabka oo goor dhow si aqlabiyad leh ku ansixiyey...